प्रार्थना - परिकल्पना
गृहपृष्ठ / सम्पादकीय / प्रार्थना
by परिकल्पना on May 16, 2021 in सम्पादकीय
✍ रामप्रसाद सुबेदी
प्रार्थना भन्नाले वन्दना, स्तुति भन्ने बुझिन्छ । वन्दना प्रशंसा हो । प्राय: देवतालाई वन्दना गरिन्छ । प्रार्थना विनय भावले गरिने हुँदा यसलाई विन्ती वा पुकारा पनि भन्ने गर्दछ्न् । सारमा भन्नुपर्दा यो बडालाई गरिने प्रशंसा हो । त्यसो हुनाले वन्दनालाई प्रशस्ति भन्न पनि सकिन्छ । भगवान वा मान्छे जो आफूभन्दा ठूला छ्न् तिनका प्रशंसामा उनीहरूका विभिन्न प्रशंसनीय कार्यहरू जोड्दै विभिन्न अलङ्कार र उपमाहरूले सिँगार्दै खुसी बनाउन दिइने जुनसुकै अभिव्यक्तिहरू वन्दना वा प्रार्थना हुन् ।
प्रार्थनाले शान्ति प्राप्त हुन्छ । पहिलो आफ्नो प्रार्थनाले आफ्नो अपेक्षा अनुरूपको फल कसैले दिन्छ भन्ने विश्वास हुने गर्दछ भने दोस्रो प्रार्थनाले प्रार्थना गरिएकै देवता वा मान्छेले आफूलाई अनिष्ट गर्नबाट जोगिन्छ भन्ने निश्चिन्तता प्राप्त हुन्छ । यसै हुनाले देवता वा अनिष्टकारी दशाहरू दुबैलाई प्रार्थना गरिन्छ । धार्मिक क्षेत्रमा पाइने सम्पूर्ण मन्त्रहरू वास्तवमा प्रार्थना गर्ने हतियार वा साधनहरू हुन् । आफूले नसक्ने कार्य शक्तिशाली व्यक्तिलाई गराउन पर्दा अनुरोध त गर्नुपर्‍यो अनुरोध गर्दा उसको प्रशंसा वा प्रार्थना नगरी खुसी हुँदैन ! प्रार्थनाले ठूल्ठूला शक्तिहरूलाई आफ्ना पक्षमा पार्न सकिन्छ यसर्थ प्रार्थनालाई महाशक्ति भनिएको हो ।
मन्त्रमा शक्ति हुन्छ भन्ने कारण पनि यही हो किनकि मन्त्र प्रार्थनाको साधन हो र यसले देवतालाई खुसी पार्छ र अभीष्ट वर वा मागिएको वस्तुको दान प्राप्त हुन्छ । यसकारण यसलाई वरदान भन्ने गरिन्छ ।
प्रार्थनाले झैझगडा हुँदैन । प्राथना गर्ने व्यक्ति प्रशंसक हुन्छ र यस्ता मान्छेहरू रिसाहा हुँदैनन् धेरैका प्यारा पनि हुन्छन् । मान्छे होऊन् वा मान्छेले प्रशंसा गरेका वा पुजेका देवता होऊन् ती सबै प्रशंसाका भोका छ्न् त्यसैले प्रार्थी वा यजक वा प्रशंसक मान्छेहरूका शत्रु अवश्य कम हुन्छन् । शत्रु कम भएको मान्छे निश्चिन्त र शान्तिको जीवन जिउन पाउँछ । यसैले प्रार्थनाको जीवनमा ठूलो महत्व हुन्छ । आधुनिक जमानामा प्रार्थनाको महत्व केही घटेको हो कि भन्ने पनि लाग्छ । कारण यो अधिकारको जमाना हो । कर्तव्य पूरा गरेपछि अधिकार नियमले नै पाइन्छ कसैको निगाहले दिइरहनु पर्दैन भन्ने मानसिकताको वृद्धि भएको पनि छ । प्रार्थनाको विपरीत गाली हो गाली प्रशंसासँगै जन्मिएको हो । धार्मिक मन्त्रहरूमा पनि गाली रहेका छ्न् । प्रशंसा र गालीले राम्रो को र नराम्रो को भन्ने पनि चिनिन्छ । जेहोस् समय जतिसुकै परिवर्तन भएपनि विनयशील मान्छेको महत्त्व कहिल्यै कम नहुने हुनाले प्रार्थनाको पनि महत्त्व भइरहन्छ । राष्ट्रिय गीतहरू पनि प्रार्थनाका फरक रूप हुन् । मानव जीवन रहेसम्म प्रार्थनाको महत्त्व पनि रहिरहन्छ । हामी आमा, बा, गुरु, जन्मभूमि र ईश्वरको प्रार्थना गरिरहन्छौँ ।
प्रार्थना एउटा ठूलो सम्मान हो । सम्मानले सबैलाई आनन्दित तुल्याउँछ । प्रार्थनाले सम्मान हुन्छ । त्यसो हुनाले चाहे शक्ति होस् चाहे कल्याण एवम् शान्तिका लागि होस् जो ती कुराहरू दिनका लागि सक्षम छ उसैलाई प्रार्थना गरिन्छ । आफूभन्दा कमजोरलाई प्रार्थना गरेको उदाहरण भेटिँदैन । प्रार्थनामा सेवाभाव पनि हुनाले देवता वा बडा मानिसहरूप्रति बाजा वा नगरा समर्पण गर्नुलाई सेवा लगाउनु भन्ने संस्कृति अझै छ । प्रार्थना वा सेवा प्राप्त भएपछि सेवक, प्रशंसक र यजक जो भए पनि तिनीहरूको संरक्षणलगायत पालन पोषण गर्ने जिम्मेवारीसमेत बडाकै रहने कुरा अनेक प्रकारका धार्मिक कथा वा राजा-रङ्कका इतिहासहरूमा भेट्न सकिन्छ । शक्तिशाली व्यक्तिहरूले आफ्नो पक्षमा कोको छन् भन्ने छुट्याउने आधार पनि प्रशंसा वा प्रार्थना नै हुने गरेको पाइन्छ ।
विधा # सम्पादकीय
✍️ परिकल्पना at May 16, 2021
शिक्षक पार्टीको परिकल्पना
प्रिय शिक्षक साथीहरू, यो मेरो अनुरोध जति सक्दो सेयर गरि मुलुकका सबै न्याय प्रेमी शिक्षक सम्म पर्यउनु हुनेछ भनेर बिस्वास लिएको छु। यो बिचमा...
Basanta Regmi Into Oblivion As I stood under the sun watching the sky limited by my eyesight, it started to flow into me and became limitle...
कोरोना भाईरस(COVID-19) पश्चात नेपाली पर्यटन क्षेत्रको पथ
पृष्ठभुमी माधव सुबेदी जव सरकारले २० लाख पर्यटक भित्राउने लक्ष्यका साथ २०२० लाई Visit Nepal का रूपमा मनाउने निर्णय गर्यो, लगानीकर्ता...
म महिला , एक नर्स ! न बिदा लिन मिल्छ न बिदा दिन मिल्छ ! म घर बसे तिमीलाइ कस्ले हेर्छ ? म माथि यत्रो दुर्व्यवहार किन गर्छौ ? म जस्तो अर्को को...
अभिलेख May 2021 (13) June 2021 (46)
सामाजिक संजालमा हामीसंग जोडिनुहोस